SAMOTALIS: MUSTASHAR AXMED CARWO" GEERI INA WADA TAABATAY IYO MURUGO GURI WALBA GILGISHAY"
MUSTASHAR AXMED CARWO" GEERI INA WADA TAABATAY IYO MURUGO GURI WALBA GILGISHAY"
INNAA LILLAA WA INNAA ILLEYHI RAAJACUUN
Ugu horeyn aan la wadaago naxdinta iyo qoomamada waalidka ku wiil iyo gabadh waayey badda cad, aan la ilmeeyo walaalaha is waayey, aan la murugoodo qaranka waaxda weyn go'day. Aan xusuus tiiraanyo leh la qaybsado ubad iyo ooriyo asaagood waayey, aan la xanuunsado asxaab waqtigu kala kaxeeyey.
Waa maalin murugo, waa dharaar uurku taalo, waa habeen gudcur ah oo dabeyl iyo duufaan geeri daafaha Soomaliland dhammeysay. Waa adduunyo oo xaalkeedu waa naxdin joogto ah oo kolba reer dul taagan. Waxa la yidhi balaayo intay kaa maqantay cid kale ayey ku maqantay.
Murugo dabadeed aan u soo dego xaqiiqda, oo aan tacsi qalbiga ah u diro qoysaska, ehelka, qaraabada, iyo asxaabta ay ubadkoodii ay dhigoodu ku hoobteen doonida geerida ee ku degtay badda. Waxaan marxuumiinta Alle uga baryayaa inuu u naxariisto, qabriga u nuuro, ugana dhigo beer ka mid ah jannooyinkiisa,
Inta ay ka baxayna waxaan Alle uga baryayaa inuu waafajiyo samir iyo duco. Waa geeri ina wada taabatay iyo murugo guri wal oo Soomaliyeedba gilgishay.
Dhalinyaradu waa mustaqbalka ummad kasta, waa iyaga kuwa horumarka lagu gaadhaa, waa iyaga kuwa daafaca nabadda iyo jiritaanka qaranka, waa iyaga kuwa waalidkood ku nastaan, waa iyaga kuwa cadowgu ka naxaa, waa cududa ina ilaalisa iyo muruqa inoo shaqeeya. Qorshaha horumarinta iyaga ayaa mudnaanta leh.
Waa qadar Alle oo tiiraanyo waa inoo joogto. Waxa kale duwan sababta geerida ma se aha mid leys hortaagi karo. Haddana aadmigu ma daayo ciil kaanbi iyo gocosho aan wax tarin.
Alle waxuu inoo sheegay in wax waliba sabab leeyihiin. Kolka sababaha qaar uu inagu ilhaamiyo ayey dhibteedtuna joogsataa. Waa se inaynu inaguna la nimaadnaa fikirkeed iyo qorshaheed Allena talo saaranaa.
Kow waxa ka ah in sharci adag laga yeesho tahriibayaasha, oo la adkeeyo xuduudaha iyo dhoofka. Ciqaab adag waa in la mariyaa kuwa ka ganacsada tahriibta sifo kasta ha ahaatee, ilaa kuwa u hawl yareeya iyo kuwa qariya.
Waxa xigta wacyogelin cilmiyeysan oo iskuulada duruus joogto ah looga dhigo. Waxa xigta waalidka oo sidoo kale loo abaabulo iyo khaasatan qurbo jooga faanka beenta ah iyo dhoolo tuska madhan dhalinta uga sheekeeya.
Tan seddexaad waa manhajka waxbarashada oo lagu daro duruus taariikhda iyo qarannimada ah, dal jecleysi lagu abuuro ardayda, iyo manhajka jaamacadaha oo loo qorsheeyo shaqooyinka banaan, ha u bataan kuwa farsamooyinka gacanta heer dugsi sare iyo jaamacadba. Waa inay wada socdaan suuqa shaqada iyo tacliintu.
Waa ina dib loo eegaa nidaamka shaqo gelinta qaranka iyo tan sharkadaha waaweyn, oo loo dhigaa nidaam cadaalad ah oo dhalintu aamin karto, kana dhex arki karto mustaqbalkooda.
Arrintani waa mid dhinac siyaasi leh oo u baahan inaan xisbinimo mucaarid amba muxaafid ka faa'iideysan ee loo arko waajib qaran.
Waa in hayadaha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ahba lagu anraa inayna debedda ka keenin shaqaale iyaga oo ka heli kara gudaha dalka.
Waa in la hirgeliyaa nudaamka maal gashiga oo lagu abuuro sharkado, iyo warshado shaqo abuur ah, iyada oo dawladdu dheerigelineyso ganacsatada shaqada abuurta oo la siiyo cashuur dhaaf amba taakulin maal gashi oo kale.
Waa aragti shimbireed aan degdeg u soo tuuray mawduucani waa mid baaxad weyn oo loo baahan yahay inaynu dhab u asiibno.
La-taliyaha Madaxweynha ee Dhaqaalaha,
Ganacsiga iyo Maalgashiga.
Labels: Maqaalada Ahmed Arwo, SOCIETY, Somaliland, TACSI